Mampisahana ny fampiharana lalàna any amin’ny orinasa tsy miankina iray tsy manaja ny zon’olombelona i Okraina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Oktobra 2018 5:40 GMT
Mpanao politika vitsivitsy no niantso ireo mpiambina ho “fikambanana tsy ara-dalàna”, ary matetika ireo mpikatroka Okrainiana milaza amin'ny fiteny hoe “tafika an'olo-tokana” miasa ho an'ny tombontsoan'ny manampahefana sasany ao an-toerana.
Nipoitra ny raharaha tamin'ny volana jolay rehefa nanomboka andiana hetsika fandravana ireo tranon'olon-tsotra tsy misy baikon'ny fitsarana ireo mpiambina an'i Odessa. Nandrava ny valan-javaboary momba ny rano, Luzanovka sy ny trano fandraisam-bahiny Dom Pavlovyh, izay naharatrana mpandraharaha roa izy ireo tamin'ny 10 Jolay. Amin'ny ankapobeny, dia niteraka fahavoazana ara-pitaovana mihoatra ny 22 000 dolara amerikana ireo hetsika roa ireo.
Tamin'ny 13 Jolay, nanafika mpanao gazety nitantara izany hetsika fandravana izany – tao amin'ny toeram-piantsonan'ny fiara tao amin'ny orinasa momba ny lalàna antsoina hoe Redut – niaraka tamin'ny kibay sy baomba mandatsa-dranomaso ireo mpiambina. Noterena hiditra anaty fiara ilay mpitati-baovao Miroslav Bekchiv, avy ao amin'ny gazety Obshestvennyi Priboi, ary nentina tany amin'ny paositry ny polisy izay nidarohana azy mafy. Nentina tany amin'ny hôpitaly izy avy eo, ary nilaza ny dokotera fa naratra mafy ny lohany noho ny hasemporana sy fahamaizana teo amin'ny maso.
Nentina teo anatrehan'ny Fikambanana ho an'ny Fiarovana sy Fiarahamiasa ao Eoropa (OSCE) ny raharaha momba an'i Bekchiv ary notononina tamin'ny fivorian'ny biraon'ny sampana demokratika sy ny zon'olombelona tamin'ny 17 septambra. Hoy i Olga Panchenko, mpisolovava an'i Redut hoe:
Nanokatra fanadihadiana ny mpiambina ny tanànan'i Odessa ny Ministeran'ny Atitany. Manana fahefana hanaisotra ny fahazoan-dàlan'ireo orinasa tsy miankina ny ministera. Raha tonga amin'izany, dia mety hiteraka ohatra lehibe ho an'ireo mpiambina hafa tahaka izany any amin'ny tanàna Okraniana hafa izany.
Araka ny voalazan'ny The Babel, manana mpiasa 300 eo ny mpiambina an'i Odessa. Voalaza fa manana fitaovana miaramila mahery vaika ihany koa izy ireo, araka ny asehon'ny lahatsary izay nivezivezy tao amin'ny media sosialy. Mampiseho BRDM-2 fiara raitra mifono vy mpitondra fitaovam-piadiana niantsona teo an-tokotanin'ny biraon'ny mpiambina ao Odessa ny lahatsary.
Araka ny lahatsoratra navoakan'ny The Babel tamin'ny 5 Oktobra, nilaza ny sekreteran'ny ben'ny tanàna lefitra mpifandray amin'ny gazety, Kotlyar fa “mila fanamboarana efa hatry ny ela” ilay fiara voalaza saingy tsy nahavita nahafantatra izay tompon'izany kosa izy.
Tatitra iray hafa avy amin'ny Unsolved Crimes, fampahalalam-baovao mpanao fanadihadiana an-tserasera, namoaka lahatsary avy amin'ny adihevi-bahoaka momba ny fiara tao amin'ny Facebook izay nahitana ny lehiben'ny GUNDP (State Unitary Research Enterprise) ao Odessa, Dmitry Golovin, fa raha ny fahafantarany azy, dia ny ben'ny tanàna lefitra – Andrei Kotlyar” (minitra 7:48) no tompon'ilay fiara mifono vy.